Grand Highlander ရဲ့ နာမည် ကို အမေရိက နဲ့ ကနေဒါမှာ မူပိုင်ခွင့် မှတ်ပုံတင် လိုက်တဲ့ Toyota ! – MyMedia Myanmar
Grand Highlander ရဲ့ နာမည် ကို အမေရိက နဲ့ ကနေဒါမှာ မူပိုင်ခွင့် မှတ်ပုံတင် လိုက်တဲ့ Toyota !
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ် မကုန်ခင်လေးမှာတင် စိတ်ဝင်စား စရာ တိုးတက်မှု တစ်ခု ကိုတော့ Toyota ဆီမှာ မြင်တွေ့ ခဲ့ရ ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ကုမ္ပဏီဘက်ကနေ နှစ်ကုန်ပိုင်း လောက်ကပဲ အမေရိက ရဲ့ Patent And Trademark Office မှာ Grand Highlander အမျိုးအစား အတွက် မူပိုင်ခွင့် တင်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ပြောရမယ် ဆိုရင်တော့ အဆိုပါ မူပိုင်ခွင့်ကို တင်ခဲ့တာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာ လ ၂၈ ရက် နေ့က ဖြစ်ပြီး ဘာကြောင့် အခုလောက်ထိ စိတ်လှုပ်ရှား စရာ ကောင်းနေရတာ လဲ ဆိုတာ ကတော့ အဆိုပါ ကားကို တကယ့်ကို နှစ်လိုဖွယ် ကားသစ်တစ်စီး ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် အခုအချိန်မှာ Toyota ဟာ သူတို့ ဖန်တီးမယ့် ထုထည်ကြီးကြီးလှပတဲ့ SUV ကား အတွက် Inspiration ကောင်းကောင်းနဲ့ ပြင်ဆင်နေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိ မျိုးဆက် Highlander ကတော့ ဘယ်လိုမှ ဟောင်းနွမ်းမသွား သေးပဲ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ကပဲ ထုတ်လုပ် ခဲ့တာ ဖြစ်ကာ ၂၀၂၀ အနေ မော်ဒယ် အနေနဲ့ပဲ ဖန်တီး ခဲ့တာပါ။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် အဆိုပါကား အမျိုးအစားကလည်း အချိန်အ တိုင်း အတာ ‌တစ်ခုလောက်အထိ ဖြတ်သန်း လာခဲ့ရအပြီးမှာတော့ ကားရဲ့ဒီဇိုင်းပိုင်း ပြောင်းလဲမှုတွေကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင် လာနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ လက်ရှိအချိန်မှာ ဘယ်နေရာမှာ မဆို ပိုပြီးတော့ ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေ ကလည်း ပြင်းထန် လာတာကြောင့် အခုလို ခပ်မြန်မြန် လုပ်ရှား နေရတဲ့ သဘောပါပဲ။ Toyota ဘက်ကလည်း အဆိုပါ အခြေ အနေတွေကို အကောင်းဆုံး ရိပ်စားမိဟန်တူတာ ဖြစ်ပြီး Highlander ရဲ့ ထိုင်ခုံသုံးတန်းပါတဲ့ ဒီဇိုင်းပုံရိပ် ကိုလည်း မြှင့်တင် ပေးချင်နေတဲ့ အနေအထား ရှိပါတယ်။
တကယ်တော့ အဆိုပါ ကားဟာ ကြီးမားတဲ့ SUV ကား တစ်စီး မဟုတ်ပေမယ့်လည်း သူ့ရဲ့ ရှိထားပြီးသား အရွယ် အစားကတော့ အနောက်ဆုံး က ထိုင်ခုံမှာ ထိုင်မယ့် ခရီးသည် တစ်ချို့ အတွက်တော့ အနည်းငယ် သက်တောင့် သက်သာ ဖြစ်စေမှုကို လျော့နည်းစေနေတာ တော့ ဖြစ်ပါတယ်။ သေချာတာကတော့ အရွယ်ရောက်ပြီးသား သူတွေ အတွက် တကယ်ကို အဆင်မပြေနိုင်ပဲ အခုအဲ့ဒီနေရာကပဲ Highlander အသစ်မှာ အဓိက ပြင်ဆင် လာနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ ဒီဇိုင်း ပိုင်းတွေကတော့ အခု Highlander အသစ် ရဲ့ Trademark Application မှာ အဓိက အရေး ပါ တဲ့ နေရာမှာ ပါဝင်လာတာ ဖြစ်ပြီး အချို့သော Rumor ကတော့ ဒီ အပိုင်းတွေ နဲ့ဆက်စပ်ပြီး ဘာမှ အတိအကျ မဖော်ပြနိုင် သေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း Toyota ဘက်က သတင်း တစ်ချို့ အရတော့ Highlander ရဲ့ အနာဂတ် ဟာ လက်ရှိ မျိုးဆက် SUV ရဲ့ ဈေးကွက် အတွင်း ဆက်လက်ရှင်သန် နေဆဲမို့လို့ အနည်းငယ် တိတ်ဆိတ် နေရ သေးတာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု အချိန် အထိတော့အရွယ် အစား ပိုမိုကြီးမား နေတဲ့ Highlander အသစ် ရဲ့ စမ်းသပ် ယာဉ် တွေကို မြင်တွေ့ ရခြင်း မရှိသေးကာ လက်ရှိ Model ကလည်း သစ်လွင်ဆဲ ဖြစ်တာ ကြောင့် Mid-Cycle Update တွေ ပါ ရရှိဖို့ အလှမ်းဝေး နေသေးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ယခင် ထက် ပိုမို ရှည် လျားပြီး ကျယ်ပြောတဲ့ Highlander အသစ် ဟာ ဒီဇိုင်း စာရွက်ပေါ်မှာပဲ ရှိတော့မှာ မဟုတ်ပဲ အခု မြင်တွေ့ ရတဲ့ ဒီဇိုင်း မူပိုင်ခွင့်တွေ အရတော့ မကြာမီမှာပဲ အဆိုပါ အိုင်ဒီယာ တွေ အတိုင်း ထွက်ပေါ်လာနိုင်တယ် လို့ ဆိုလို့ ရပါ တယ်။
ဒါကြောင့် တကယ်ကို ကြီးမားတဲ့ Grand Highlander အမျိုးအစား တွေ ရောက်ရှိလာမယ်ဆိုရင် တကယ် တမ်း ကားရဲ့ အတွင်း ပိုင်းမှာ ပိုပြီး နေရာလွတ် တွေ ရှိလာ လိမ့်မယ် လို့ မျှော်လင့် လို့ ရပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ချေ သ‌ဘော တရားတွေ နဲ့ ယှဉ် ထိုးပြီး စဉ်းစား ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ တတိယမြောက် ခုံတန်းကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း လေးပဲ ကျယ် သွားအောင် ဆွဲဆန့် လိုက်မယ် ဆိုတဲ့ သဘောပါပဲ။ ဒါ့အပြင် နောက်ထပ် ရှိလာနိုင်တဲ့ အကျိုး သက်ရောက်မှု က တော့ Highlander ရဲ့ ဈေးနှုန်း ကတော့ မြင့်တက်လာနိုင်တဲ့ သဘောပါ။ ဒါပေမယ့် သိထားရမယ့် အချက်က တော့ နဂို ကတည်းက အဆိုပါ ကား ဟာ ဈေးနှုန်း အမြင့်ပိုင်းမှာ ပဲ ရပ်တည် နေခဲ့ တာ ဖြစ်တယ် ဆိုတာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် လည်း အမေရိကဈေးကွက်ထဲမှာ ပိုပြီး ဈေးနှုန်းအရ အတော်လေး မြင့်မားနေတဲ့ Land Cruiser ကလည်း ရှိပြီး သား ဖြစ်နေတာ ကြောင့် အခုလိုမျိုး Toyota ရဲ့ Lineup အတွင်းမှာတော့ နေရာကောင်း တစ်နေရာရရှိလာ နိုင်တာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
The post Grand Highlander ရဲ့ နာမည် ကို အမေရိက နဲ့ ကနေဒါမှာ မူပိုင်ခွင့် မှတ်ပုံတင် လိုက်တဲ့ Toyota ! appeared first on MyCars Myanmar.
MyMedia Myanmar2021-01-06T17:31:30+06:30January 6th, 2021|MYCARS MYANMAR|